Xhosa Umzimba wam ngumzimba wam
Umzimba wam Ngumzimba wam
Ukuba Ayivakali ilungile- Ungayenzi
Umdlalo “Ungathini Ukuba”
Imibuzo eqhele ukubuzwa
Limpawu zokuhlukunyeza kwabantwana
Khuphela ukufundisa .pdf
Lengcamango ivela kumbutho wezizwe lwehlabathi liphela nephathelele ekunqandweni kwempatho-mbi kunye nokungakhathalelwa kwabantwana (ISPCAN). Uphando nzulu ngalomba lonyaka u-2012 lubonakalisa ukuba kwihlabathi jikelele ngabantwana abangamashumi amabini anesihlanu ekhulwini (25%) ukuya kumashumi amahlanu ekhulwini (50%) abaphathwa kakubi emzimbeni , yaye akuphelelanga apho, kukwakho malunga namashumi amabini ekhulwini (20%) lwamantombazana kunye nesihlanu ekhulwini (5%) ukuya kwishumi ekhulwini (10%) amakhwenkwana akaxhatshazwa kakubi ngesondo. Zininzi ke neziphumo, hayi kuphela nje kwabobantu bachaphazelekayo, koko noluntu luphela, nto-leyo ekungafunekanga ijongelwe phantsi.
Le nkqubo “Umzimba wam ngumzimba wam” yinkqubo enoculo ongaxhalabisiyo kwaye nendlela entle mayela nesi sihloko sinzima nesihlasimlisayo. Ukuzama ukunceda abantwana abancinane ngendlela echanekileyo ingangumsebenzi onzima kunene kuninzi labazali, abafundi- ntsapho okanye ootishala kunye nabagcini-ntsapho. Uyakufumanisa ukuba umculo oyolisayo kulenkqubo unceda ukubeni uhlangabezane kakuhle nalula nabantwana.
Kwakwalapha kulenkqubo uyakufumanisa ukuba kukho iingcamango kunye namacebo kwiculo nesihloko ngasinye. Okona kubalulekileyo kule nkqubo yinto yokuba bayakuwakhumbula amaculo nemiyalezo ephathelelene nale miba, kwaye oku kuyakudala uthungelwano ngezimvo nabantwana. Xa bekwazi ukuthetha ngezimvo zabo kwaneengxaki zabo, oko iyakuba yinto enkulu ekulweni ukuxhatshazwa kwabantwana.
Kuphando olubandakanya abantwana nolwalupapashwe kwiphepha-ndaba i- Journal of Music Therapy, lwabonakalisa ukuba umculo nokufunda amaculo amatsha kudala ukuziqonda ngokwakho nokuphuhlisa ukuzixabisa yaye kunceda nabantwana bazibone okanye bazive bengcono.
“The Power of Music- University of London”
Umzimba Wam Ngumzimba Wam Opheleleyo
Indlela yokusebenzisa le nkqubo
Qinisekisa ukuba iyonwabisa –
La maculo anodlamko oluvela kumlinganisi obizwa ukuba ngu Cynthie, oku kunceda ukuba uwubone umyalezo lo wale nkqubo ulula. Kufuneka ucule nawe, usebenzise izandla zakho okanye udanise, wenze nantoni na enokwenza lomyalezo ukhumbuleke.
​Qiniseka ukuba uyigcina ilula –
Qaphela, abantwana abancinane akunyanzelekanga ukuba bazi nzulu ngeenkcukhacha zohlukumezo, banike nje
1. Makungabikho mntu okuvisa ubuhlungu
2. Makungabikho mntu ochukumisa amalungu akho angasese
3. Makungabikho mntu othatha imifanekiso okanye ofota amalungu akho angasese
​4. Ukuba unengxaki, yixele komnye umntu
5. Musa ukuyifihla into elihlebo eyenziwe kuwe ukuba kukho okuhlukumezayo
6. Xelela omnye umntu ukuba kukho umntu okukhathazayo
Qinisekisa ukuba iyakhuthaza –
Injongo enkulu apha kukwenza abantwana bazithembe ngemizimba yabo kwaye bakhuseleke besazi ukuba
banomntu abanokuxela kuye xa kukho ingxaki.
Amaculo akulenkqubo ngala alendelayo:
Umzimba Wam Ngumzimba Wam (cofa apha ukuze ubukele lomfanekiso)
Ukuba ayivakali ilungile ungayenzi (cofa apha ukuze ubukele lomfanekiso)
Umdlalo “Ungathini ukuba” (cofa apha ukuze ubukele lomfanekiso)
Ukuba unengxaki (cofa apha ukuze ubukele lomfanekiso)
Uthando lumnene (cofa apha ukuze ubukele lomfanekiso)
Le nkqubo kunye nezingoma zibhalwe kwaye zanikwa ubomi ngu
Chrissy Sykes © 2017
Sponsor Stichting GetOn​
Translations by : LOYISO GURA
Voice Over and Songs by @ZoyaSpeaks
Yabelana ngale khasi kwi facebook